ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘင်္ဂါလီတို့အပေါ် ဂျီနိုဆိုက်မရှိကြောင်းကို လက်ခံရေး နယ်သာလန်ပါလီမန်၌ ဆွေးနွေးမည်။ ဂမ်ဘီယာဘက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နယ်သာလန်နိုင်ငံရေး လောက သဘောထား ကွဲလွဲ – H2Oupdatenews
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘင်္ဂါလီတို့အပေါ် ဂျီနိုဆိုက်မရှိကြောင်းကို လက်ခံရေး နယ်သာလန်ပါလီမန်၌ ဆွေးနွေးမည်။ ဂမ်ဘီယာဘက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နယ်သာလန်နိုင်ငံရေး လောက သဘောထား ကွဲလွဲ
နယ်သာလန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် Tweede Kamer der Staten-Generaal သည် သောကြာနေ့ ( ယနေ့ ) တွင် မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း နယ်သာလန်သတင်းစာ NL Times ( အင်္ဂလိပ် ) က ယနေ့ရေးသားသည်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်သည် ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာ တရားခုံရုံး ICJ ၏ ဘင်္ဂါလီ (မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) တို့အပေါ် ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှု့ စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေခိုက် ဒတ်ချ်အောက်လွှတ်တော်က ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် ဟိဂ်မြို့ ICJ ခုံရုံး တရားသူကြီးများရှေ့မှောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ ထွက်ဆိုရာတွင် ၂၀၁၇-ခုနှစ် ရခိုင်မြောက်ဖျား၌ ဘင်္ဂါလီသူပုန်တို့ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ရာ၌ အင်အားအလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်ဆိုခြင်းကို ချန်လှပ်ထားရန် ခက်ခဲပါကြောင်း၊ ဖြစ်စရာရှိလျှင် စစ်ရာဇဝတ်မှု့သာဖြစ်ပြီး လူမျိုးသုဉ်းပြုခြင်း မမြောက်ကြောင်း၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇဝတ်မှု့ကျူးလွန်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားတွေ့ရှိပါက ကျူးလွန်သူတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်တိုင်သာ အရေးယူအပြစ်ပေးသင့်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားသည်။
ရှုတ်ထွေးလှသော အဆိုပါ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို တမင်ရည်ရွယ်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်သက်သက်ဖြစ်သည့် ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှု့အဖြစ် ဖော်ပြရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဂမ်ဘီယာသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လှည့်စားသတင်းများအခြေခံလျှက် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၆-ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်သည် မြန်မာနယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းစခန်းများစွာတို့ကို သူပုန်တို့စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီတို့ နေထိုင်ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ယခုလည်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ယမန်နှစ် ကုလသမဂ္ဂ၏အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သူပုန်များကို တိုက်ခိုက်ရာ၌ ကျေးရွာများ မီးရှို့ ခံရကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ မိန်းမနှင့် မိန်းမပျိုလေးများ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်။ လူပေါင်း ၂၅,၀၀၀ ကျော် အသတ်ခံရ၍ အိမ်နီးခြင်းဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသို့ လူသိန်းချီထွက်ပြေးရကြောင်း တင်ပြထားသည်။ စာအုပ်ကြီး လေ့ကျင့်ခန်းပါအတိုင်း လူမျိုးသုတ်သင်မှု့အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီမျိုး နွယ်စုအပေါ် လူမျိုးသုဉ်းစေရန် တမင်ရည်ရွယ်လျှက် လူသတ်ခြင်း၊ မုဒိန်းကျင့်ခြင်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းများကို အခြေခံလျှက် လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ဂမ်ဘီယာက မြန်မာနိုင်ငံအား ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှု့အဖြစ် နိုင်ငံတကာတရားခုံရုံး ICJ တွင် တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂါနေ့ ICJ ခုံရုံးတွင် မြန်မာက ဒုက္ခ သည်ဘင်္ဂါလီတို့အပေါ် စိတ်ထင်တိုင်း လူသတ်နေခြင်းကို တားဆီးပေးပါရန် ဂမ်ဘီယာကိုယ်စားပြုသူက လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ယနေ့ ဒတ်ချ်ပါလီမန် အောက်လွှတ်တော်သည် ဂမ်ဘီယာပြောဆိုစွပ်စွဲသည့် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံခြင်းကို တံခါးပိတ်ဆောင် ရွက်ရန် စီစဉ်ထားပြီး မည်သည့်မီဒီယာမျှ သတင်းရယူခွင့်မပြုကြောင်း သိရှိရသည်။
နယ်သာလန်အစိုးရသည် မကြာသေးမီကပင် ICJ ဂျီနိုဆိုက်အမှု့၌ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်မှ ထောက်ခံရပ်တည်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
(( တစ်ခါက ကလေးငယ်ကလေးတစ်ဦး မတော်တဆ အစာနင်ပြီး သတ်လစ်မေ့မျောသွားသည်။ ကံအားလျှော်စွာ အနီးတွင် ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိနေရာ ကလေးငယ်လည်ချောင်းမှ အစာကို ကောင်းစွာထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကလေးမှာ အသက်ရှူရပ်တန့်နေပြီး နှလုံးမခုန်တော့ချေ။ မည်သည့် ကိရိယာ အထောက်အကူအညီမှ မရှိသော ဆရာဝန်သည် ကလေးအသက်ပြန်လည်ရှူစေရန် “ Mouth to Mouth “ နှင့် နှလုံပြန်ခုန်စေရန် “ Cardiac massage “ အရေးပေါ်ကုထုံးဖြင့် ကုသသည်။ ကလေးငယ်မှာ အသက်ရှင်သော်လည်း နှလုံးနှိပ်နယ် ပြုစုရာတွင် ကလေး၏ နံရိုးကျိုးသွားပြီး ဆရာဝန်သည် တရားစွဲခံရသည်။ ၄-မိနစ်အတွင်း အသက်ရှူနှလုံးခုန်စေရန် အရေးတကြီးလိုအပ်သည့် လူနာအားပြုစုခြင်းမှန်ကန်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်မှု့အသုံးချရာတွင် ချိန်ဆခြင်းမရှိသဖြင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်အား နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့် ပိတ်ပင်ခံရတော့သည်။
အမှု့တစ်ခုတွင် ရှေ့နေတစ်ဦးက မိမိလိုက်ပါဆောင်ရွက်သော အမှု့သည် ရေးကူးလာသည့် အခြားတရားရုံးဆိုင်ရာ မိတ္တူကို ယခုတရားရုံးတော်သို့ တင်သွင်းသည်။ သို့သော် ၎င်းမိတ္တူသည် မူရင်းအတိုင်းအမှန်မဟုတ်ပဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားကြောင်း ရုံးတော်က စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်။ အမှု့သည်အတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည် မှန်သော်လည်း မိမိ၏ ဥပဒေပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု့အရ ပြန်လှန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုပဲ ရုံးတော်သို့ မမှန်မကန် သက်သေတင်သွင်းမှု့ဖြင့် ရှေ့နေ တရားစွဲခံရလေသည်။
ကျူးလွန်မှု့တွင် လူသေဆုံးလျှင် လူသတ်မှု့ဖြင့် ပြစ်ဒါဏ်ကျခံရတတ်သည်။ စစ်တိုက်ရာတွင် လူသေဆုံးမှု့ရှိတတ်သည် သို့သော် အရေးယူ၍ မရချေ။ ဤတွင် လူသေဆုံးမှု့ဖြစ်ပွားခြင်းမှန်သော်လည်း စစ်တိုက်ခြင်းသည် တရားဝင် လူသတ်ခြင်းတော့ မဟုတ်ချေ။ ထို့ပြင် ဥပဒေအကြောင်း တစ်ဖွဖွပြောဆိုသည့်တိုင် ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်သည်ဟု တစ်ထစ်ချ မဆိုသာချေ။
ထိုသို့ဆိုလျှင် “ Professional “ ခေါ် ကျွမ်းကျင်မှု့ တတ်ကျွမ်းသူတို့၏ ခါးသီးလှသော အာဝေဏိက ဒုက္ခတို့ကို ချင့်ချိန်နိုင်လောက်ပါပြီ။
အင်းဒင်မှု့ခင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှု့မှန်သော်လည်း ဂျီနိုဆိုက်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ တာဝန်ရှိသော စစ်ဖက်နှင့် ရဲဖက်အကြီးတန်း အရာရှိကြီးများ ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးကာ အရေးယူခံရသည်။ သို့သော် ၇-လခန့် ( ဟု ထင်ပါသည် ) တွင် တပ်မတော်အက်ဥပဒေအရ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိသွားသည်။
ဘားရက်အိုဘားမားသည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်အား အမေရိကန်သမ္မတရာထူးလွှဲပြောင်းပေးကာနီးတွင် ချယ်ဆီး(အဲလိဇဘက်)မန်းနင်းအား လက်ကျန်ထောင်ဒါဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သည်။ ချယ်ဆီးမန်းနင်းသည် ၂၀၁၀- ခုနှစ် အီရတ်စစ်မြေပြင်၌ စစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် စစ်ဖက်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတန်း တစ်သောင်းကျော်ကို ဝီကီလီခ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ စစ်ခုံရုံးမှ ထောင်ဒါဏ် ၃၅-နှစ် အပြစ်ပေးထားသည့် မန်းနင်းကို ၇-နှစ်ကျခံပြီးနောက် လွတ်ငြိမ်းပေးလိုက်၍ အိုဘားမားအား အမေရိကန် စစ်ဖက်က ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ( BBC သတင်း၊ Jan-18.2017 ရှု့ )
မကြာသေးမီက ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အာဖဂန်စစ်မြေပြင်တွင် စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ရာ၌ အပြစ်မဲ့အရပ်သားများအား ထိခိုက်စေသဖြင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်သည်ဟု ထောင်ဒါဏ်ကျခံနေရသော အမေရိကန်အထူူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု့စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ရုံးတော်၌ စစ်ဆေးခံနေရသော အခြား စစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂-ဦးကို သမ္မတ၏ အခွင့်အာဏာသုံးကာ ပြစ်ဒါဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပြုလိုက်သည်။ (New York Times သတင်း. Nov-15.2019 ရှု့ )
နှစ် ၇၀ ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စစ်တပ်နှင့် ကမ္ဘ္ဘာ့ထိပ်တန်း အဆင့် ၁ တပ်မတော် တို့အား မတန်မရာ တန်းတူထား ကိုးကားသည်တော့မဟုတ်ပါ။
ကျွမ်းကျင်မှု့ကို ချိန်ဆအသုံးပြုရသူတို့၏ အာဝေဏိက ဒုက္ခတို့ကို ကုစားရာတွင် အဆဲခံရတတ်ခြင်းကို တင်ပြလိုရင်းသာဖြစ်သည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( NL Times., Dec. 12, 2019, “ DUTCH PARLIAMENT TO RECEIVE MYANMAR LEADER AFTER “NO GENOCIDE” TESTIMONY. “By Janene Pieters ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
#ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဒတ်ချ်ပါလီမန် #အိုဘားမားချယ်ဆီးမန်းနင်း #ICJနိုင်ငံတကာတရားခုံရုံး #ဒေါ်နယ်ထရမ့်အာဖဂန်စစ်ရာဇဝတ်မှုတရားခံ
Previous Previous post: မွတ်စလင်မဟုတ်သူများအတွက် နိုင်ငံသားဥပဒေကြမ်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြရာမှ အာသံပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် မှုများဖြစ်ပွား၊ အိန္ဒိယ ဗဟိုအစိုးရ စစ်တပ်များစေလွှတ်။ အင်တာနက် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်၍ နေဝင်မီးငြိမ်းအမိန့်ထုတ်
Next Next post: မြန်မာဘက်ရှေ့နေ ဝီလျှံရှားဘက်စ်က အယ်လ်ဂျားဇီးယားပါ ဂျီနိုဆိုက်ဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းခြင်း